Xirmooyinka Dhinacyada Qaabdhismeedka Xidhitaanka Laastikada 29.5 ″ -45.3 ″ Ragga Qubayska Dharka |
Xirmooyinka Dhinacyada Qaabdhismeedka Xiritaanka Elastic 29.5 lastic -45.3 ″ Ragga Qubayska Dharka
· Dharka ugu fiican ee jimicsiga xoogga badan.
· Dhinacyada qaabaysan ee tolmo kala duwanaantu ku dheehan tahay waxay soo saartaa muuqaalka ugu fiican ee jirkaaga.
Laastik sare oo ku jira dhexda
Nuxurka: Dharka dabbaasha ee ragga loogu talagalay raaxada buuxda iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa guud, kuwani waa warbixinno feer ah oo loogu talagalay ragga doonaya inay iska daayaan maalinta oo dhan, maalin kasta.
RATA RELAXED: Ka samaysan dhar jilicsan oo qoyan oo jilicsan oo ay ka muuqdaan duqsi iyo suunka duudduuban ee ka soo horjeedka duubista, nimankan dharka hoose ee koodhadhkoodu waxay leeyihiin shaashad 5 ”waxayna si raaxo leh ugu fadhiyaan bowdada dhexdeeda.
TAAGEERADA: Qoraaladayaga feeryahannada waxay la yimaadaan qalab loo yaqaan 'BallPark Pouch' oo loo yaqaan 'Patent Pouch' si loo yareeyo jahwareerka isla markaana loo ilaaliyo qaybahaaga ninba meel ay ku yaalliin qolal mesh neefsanaya oo loogu talagalay raaxada aan xasilooneyn.
TILMAAN-DHISMAHA:Nigiskan wuxuu leeyahay seddex-D Fit oo loogu talagalay raaxada ergonomic dhameystiran, iyo Flat Out Seams si looga hortago xanaaqa. Feeryahannada daryeelka fudud ayaa mashiinka lagu dhaqaa oo lagu qalajiyaa eber dhib.
Cabbirka M: Dhexda 29.5 "-33.5";
Xajmiga L: Dhexda 33.6 "-37.4";
Cabbirka XL: Dhexda 35 "-40";
Cabbirka 2XL: Dhexda 37.4 "-45.3".
Dhar: 85% Nylon, 15% Spandex, Dahaarka: 116% Polyester
Khafiif ah oo dhakhso u engegi oo iska caabiya boodhka, dhexda laastikada ah
Kalsoonida iyo adkeysiga muddada dheer, ee ku habboon dabaasha iyo nashaadaadka kale ee isboortiga
Xirfad Leh Jammer Swimsuit, Naqshad rakiban, Haddii aad doorbideysid jilicsanaan dabacsan, kor u kac cabbirka
ku dhaq gacmaha biyo qabow, sudho ama seexatid guri si aad u qalajiso. Ha biirin ama ha ku dhaqin biyo kulul. Iska ilaali qoraxda tooska ah.
1. OEM, naqshadeynta ODM ayaa dhammaantood ku habboon dharka dabbaasha. Waxaan daabacan karnaa astaantaada qaabeyntaada. Waxaad dalban kartaa naqshadeyntayada. Waxaad sidoo kale soo diri kartaa sawirkaaga gaarka ah. Waxaan kuu sameyn karnaa adiga. MAYA MOQ xaddidan Tirada kasta waa la soo dhaweynayaa. Sameynta dharka dabaasha ee la habeeyay ayaa noo ah farxad.
2. Waxaan kuu samayn karnaa daabacaadda shaashadda iyo daabacaadda sublimation digital. Xor ayaad u tahay inaad dirto nashqaddaada.
3. Midab waliba waa caadi. Waxaan kuu dheehnaan karnaa dharka.
4. MOQ-du waa sida caadiga ah 100pcs.Laakiin waxaan sameyn karnaa tiro kasta.
5. Qiimaha ayaa ah midka ugu badan ee khuseeya macaamil kasta.Haddii aad rabto inaad ogaato qiimaha.Waxaad u baahan tahay inaad ogaato qiyaasta soo socota, qaabka dharka, qalabka dharka, habka daabacaadda, qaabka, dharka dharka, tayada dharka, taariikhda gaarsiinta iwm Kuwani waa sababaha ugu waaweyn ee lagu go'aaminayo qiimaha. Inta badan ee aad dalbatid, qiimaha hoose ayaa lagu siinayaa.
Hore: Midab badan oo M-XXXXL Flat Lock tolida Ragga Miisaanka Dhimashada
Xiga: Maqaarka Saaxiibtinimada Degdega ah ee Qalalan Anti-UV Ragga Neefsashada Doomaha
Ragga Dabaasha Jirridda
Ragga Doomaha Dabaasha
Dabaasha Ragga Ragga
100% Polyester Quick Slim Fit Ragga Gaaban Dabaasha
Maqaarka Saaxiibtinimada Degdega ah ee Qalalan Anti UV Ranka Neefta leh ...
Summerdex Qalajinta Degdega ah Spandex / Nylon Ragga 'S ...
100% Nylon oo daabacan Gaagaaban Ragga Gaaban Dabaasha ...
Dhar Daba-dheeraaday Oo Aan Sii Daranayn Oo Laysku Qaadi Karo ...
Qoyaanka Dareemka Raaxo ee Dabacsanaanta Dadka Waaweyn Me ...